Richard Grenell na-amalite ịnabata ọrụ ụlọ ọrụ ọgụgụ isi ya, na-eme ka ụjọ nke mmekọ dị na ya - New York Times - NA-EGO
WASHINGTON - Oge Richard Grenell dị ka onye isi ọgụgụ isi nke mba ahụ nwere ike ịdị mkpụmkpụ oge, mana egbughị oge ọ bụla n'izu a iji bido zụọ ndị ndụmọdụ ya, na-ewepụ onye ọrụ # 2 n'aka ya. ọfịs - onye ọrụ ọgụgụ isi ogologo oge - ma webata onye ọkachamara na echiche izu nzuzo nke Trump iji nyere aka gbaa ụlọ ọrụ ahụ ọrụ, ndị isi kwuru.
Grenell rịọkwara ka e nye ya ozi banyere nkenke izu nzuzo gara aga n’ihu Kọmitii ọgụgụ isi nke ụlọ ebe ndị isi gwara ndị ome iwu na Russia na-etinye aka na ntuli aka onye isi ala na Nọvemba yana Onye isi ala Russia Vladimir V. Putin kwadoro nkwado nke ntuli aka nke Onye isi oche Trump. Nchịkọta okwu ahụ kpasuru Mazi Trump iwe mgbe ọ mere mkpesa na ndị Democrats ga-eji ya mee ihe megide ya.
Joseph Maguire, onye bụbu onye ntụzi ọrụ nke ọgụgụ isi obodo, yana onye na-esote ya, Andrew P. Hallman, gbara arụkwaghịm na Fraịde. Grenell gwara Hallman, onye a ma ama na isi ụlọ ọrụ Liberty Crossing, na ọrụ ya adịkwaghị mkpa, ndị isi abụọ kwuru. Maazị Hallman, onye ọrụ n'ọfịs ma ọ bụ na CIA ruo afọ iri atọ, kwupụtara ntụkwasị obi na ndị ọrụ ibe ya na nkwupụta mana ha kwukwara banyere "mgbanwe ndị a na-ejighị n'aka na mgbanwe".
Nchụpụ nke Maazị Hallman na ọpụpụ nke Maazị Maguire, onye lekọtara Centerlọ Ọrụ Mba Na-ahụ Maka Nsogbu, nyere Mr. Grenell aka ịwụnye ndị otu njikwa ya.
Otu n'ime ọrụ izizi ya bụ Kashyap Patel, onye isi otu nchekwa nke National Security Council na onye bụbu onye enyemaka maka onye nnọchi anya Devin Nunes, onye California Republican na onye isi oche mbụ nke Kọmitii Uche nke House. Patel na "ụlọ dị ọcha" CBS News kọrọna-ehota onye maara okwu ahụ.
Mazị Patel kacha mara amara dị ka onye isi akwụkwọ nke a ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebubo ndetu afọ abụọ gara aga bụ ndị boro ndị ọrụ FBI na ndị ọrụ ikpe ikpe ebubo na ha na-eji ikike ilebe anya ha mee ihe iji ledoo onye ndụmọdụ mgbasa ozi Trump na-akwadobu. A katọrọ ihe edetu ahụ ebe niile n'ihi na ọ na-eduhie, ọ bụ ezie na onye na-enyocha ihe mechara chọpụta nsogbu ndị ọzọ na akụkụ ụfọdụ nke nche.
Na mmekorita ya na Maazi Nunes, Maazị Patel malitere ihe ha kpọrọ ebumnuche Medusa iji nyochaa nyocha FBI iji chọpụta ma ọ bụrụ na onye so na mgbasa ozi Trump gbara izu na ntuli aka ntuli aka si Russia na 2016.
Maazi Nunes kwuru, "M goro ya ọrụ ka ọ fụchie ibo ụzọ. gwara onye edemede Lee Smith maka akwụkwọ ya "Conspiracy Against the President", nke na-akọ banyere nyocha nke Mr. Patel na nnọchite ndị Republicans na Kọmitii Uche nke House. A gbara Patel ajụjụ ọnụ nke ukwuu n’akwụkwọ ahụ, nke na-ekwu n’enweghị ihe akaebe na ndị odeakụkọ, ndị nnọchianya, ndị omebe iwu na ndị ọrụ ọgụgụ isi echepụtala imebi mkpọsa Trump. , wepụrụ ya n’ọkwa dịka onye isi ala.
Dị ka Onye na-eme ihe nchịkwa nke ọgụgụ isi nke mba, Maazị Grenell nwere ihe nzuzo ọ bụla ọ nwere ike ịchọ nyocha. Ọ rịọkwara ka ịnweta ozi sitere na CIA na ụlọ ọrụ ọgụgụ isi ndị ọzọ, dị ka mmadụ abụọ maara banyere okwu ahụ.
Nkpughe na nkowa izu nke izu azụ eweghachila egwu maka mbọ Russia na-aga n'ihu itinye aka na ntuli aka ndị US, gụnyere na ndị isi ochichi Democratic.
Na nkenke ahụ, nke a ga-elekwasị anya na nhazi n'etiti ndị ọrụ gọọmentị iji luso nnyonye anya na ntuli aka, ọ bụghị n'omume onwe ha, ndị Republican kwuru okwu mmechi nke ndị ọrụ ọgụgụ isi na ndị Russia na-aga n'ihu ihu ọma. Maazị Trump. Fọdụ ndị isi kwuru na nkenke nkọwa ahụ abụghị nke a ga-agbagha nakwa na ndị ọrụ ọgụgụ isi chọrọ naanị imeghachi ihe ha kwuru na Congress ruo ọtụtụ ọnwa.
Ndị isi ọgụgụ isi edebarala okwu ebe ndị Kremlin nọ na-anwa ime ka amụma Amerịka tinyekwa mbọ ndị ọrụ ọgụgụ isi ndị agha Russia Iji chụpụ na ụlọ ọrụ ike Ukraine nke na-arụrụ ọrụ nwa nwoke nke Onye Isi ala mbụ bụ Joseph Biden Jr. Ndị ọrụ ọchịchị chọrọ ịma ma ihe mebiri bụ mgbalị iji nyere Mr. Trump aka, gụnyere mgbalị iji mee ka Ukraine kwuwapụta. nyocha n'ime Maazi Biden nyere aka na ebubo ahụ.
Ma n'oge nzipụpụ nzipụ ozi sitere na Congress, Fiona Hill, onye bụbu onye isi White House na-arụ ọrụ na okwu Russia, dọrọ aka ná ntị banyere mbọ ndị Moscow na-agba ịgbasa disinformation.
Maazị Trump n’onwe ya dere na akwụkwọ ozi n'ọnwa Jenụwarị na njikwa usoro ọgụgụ isi ọgụgụ isi nke gọọmentị na "Russia ka bụ ihe egwu dị egwu maka ọdịmma ndị United States - na-eji omume ike iji mepụta ma kpalite esemokwu na enweghị nsogbu na United States. United, ọkachasị site na itinye aka na nchekwa nke ntuli aka anyị ”.
Na Machị 10, ndị isi ọgụgụ isi ga-eme ka ndị ụlọ ezumezu na ndị isi ụlọ ọgbakọ nwee ike ịkọwa maka nchekwa nke ntuli aka ahụ, nhazi emere izu ole na ole gara aga, maka ndị na-enyere ndị nnọkọ aka na Congress.
Ogologo oge Mr. Grenell nwere ike ịbụ onye ntụzi-aka bụ ajụjụ pụtara ìhè. Iji mee ka ọ nọrọ mgbe ọnwa Maachị 11 gasịrị - mmachi nke gọọmenti etiti tiri - Maazị Trump ga-ahọrọ onye ọzọ dịka onye nduzi nke ọkwa ọgụgụ isi mba.
Trump gwara ndị nta akụkọ na Tọzdee na ya na-atụle onye nnọchite anya Georgia Doug Collins, onye Republican kacha mma na kọmitii ọgụgụ isi, mana Mr. Collins wepụtara n'ọsọ ahụ n'ụtụtụ echi.
Maazị Collins, onye nyere aka duzie ngagharị iwe nke Onye isi ala, enwetaghị amata na ọ na-eme nyocha maka ọkwa ọgụgụ isi. Ọ hụghị ihe ọ bụla ga-ejide ọrụ ọ chọghị, ọkachasị ebe ọ na - alụ ọgụ vootu pụrụ iche maka oche na Senate na steeti ụlọ ya, Georgia.
Maazị Collins kwuru, "Amaara m nsogbu nke obodo ọgụgụ isi anyị, mana nke a abụghị ọrụ masịrị m ugbu a." na Azụmaahịa Fox. "Ọ bụghị nke ahụ ka m ga-anabata n'ihi na m na-eso na-agba ọsọ maka ndị Senate. "
Ndị nọ ya nso na Mr. Collins ekwuola na onye isi ala ahụ ga-anwa ịchụpụ Mr. Collins na ntuli aka a iji kwụsị ọgụ na-akpata ọgba aghara nke nwere ike ịhapụ ndị Republicans ịchị oche ahụ. Ndị otu pati agbaala gburugburu Senator Kelly Loeffler kemgbe Gọvanọ Brian Kemp nke Georgia họpụtara ya ka ọ jupụta oche steeti ahụ na ngwụcha afọ gara aga ma ghara ime nzuzo ọ bụla maka nlelị ha. Ọjụjụ Maazị Collins jụrụ ịhapụ agbụrụ ahụ.
Nhọpụta maka ọkwa kansụl ga-emewo ka Mr. Collins hapụ ịgba ọsọ ahụ. Mana n’enyeghi ahụmịhe ọgụgụ isi ya na ụdị ndọrọndọrọ ọchịchị, o yighị ka ndị Ochie ọ gaara akwado ya ka ọ nọrọ n’ọkwa a.
Ka Mr. Collins nọ na tebụl, Maazị Trump ga-achọ onye ọzọ ga-enwerịrị ikewa. Ndị White House na-atụle Pete Hoekstra, onye bụbu onye omekorita Republican nke bụbu onye nnọchi anya US na Netherlands, dị ka ndị isi atọ si kwuo.
O doghị anya ma ndị otu Senate ga-akwado nke ọma iji nyochaa Maazi Hoekstra. Mana ọ bụrụ na Mr. Trump ga-eziga ndị nnọchi anya na Senate, nke ahụ ga-ekwe, n'okpuru iwu gọọmentị, Maazị Grenell jee ozi ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii ọzọ.
David E. Sanger nyere aka na akụkọ Washington na Maggie Haberman sitere na New York.
Grupo Televisa, SAB (TV) Q4 2019 Earnings Call Transcript | Onye nzuzu